China mkpuchi ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Donghua
DHUA na-enye ọrụ mkpuchi maka akwa mkpuchi thermoplastic. Anyị na-arụpụta abrasion na-eguzogide ọgwụ, mgbochi mmiri na mkpuchi enyo na acrylic ma ọ bụ akwa plastik ndị ọzọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na ngwa ọrụ nhazi. Ọ bụ ebum n’uche anyị iji nyere anyị aka ị nweta nchedo karịa, idozigharị ya na ịrụ ọrụ site na mpempe akwụkwọ plastik gị.
Ọrụ mkpuchi gụnyere ihe ndị a:
• AR - Ichacha mkpuchi na-eguzogide ọgwụ
• Mgbochi Fog
• N'elu enyo mkpuchi
DHUA na-enye ọrụ mkpuchi maka akwa mkpuchi thermoplastic yana ọrụ mkpuchi anya maka ekwentị mkpanaaka. N'ebe a, anyị na-akọwa ọrụ mkpuchi anyị maka akwa mkpuchi thermoplastic.
Anyị na-arụpụta abrasion na-eguzogide ọgwụ, mgbochi mmiri na mkpuchi enyo na acrylic ma ọ bụ akwa plastik ndị ọzọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na ngwa ọrụ nhazi.
Ọ bụ ebum n’uche anyị iji nyere anyị aka ị nweta nchedo karịa, idozigharị ya na ịrụ ọrụ site na mpempe akwụkwọ plastik gị. Iji mee nke ahụ, anyị na gị na-arụ ọrụ iji họrọ mkpuchi dabere na gburugburu ebe ọrụ gị yana mmepụta chọrọ. Mgbe ahụ, anyị na-ejikọta ọrụ nkwadebe dị elu, teknụzụ ngwa ziri ezi na arụmọrụ na-arụ ọrụ mkpuchi iji mepụta arụmọrụ mkpuchi kachasị mma maka mpempe akwụkwọ plastik.
AR - Icha mkpuchi na-eguzogide ọgwụ
Ihe mkpuchi siri ike ma ọ bụ ihe mgbochi mgbochi na-akpọ nke ọma akpọ ihe mkpuchi na-eguzogide abrasion. Ihe mkpuchi anyị na-ekpuchi AR na-eme ka abrasion na-eguzogide na nguzogide kemịkal nke mpempe akwụkwọ ahụ ka ọ na-echekwa ihe ndị pụtara ìhè metụtara DHUA acrylic ma ọ bụ mpempe akwụkwọ plastik ndị ọzọ, ma gbasaa ọrụ ndụ nke ngwaahịa a.
Acrylic ma ọ bụ mpempe akwụkwọ plastik ndị ọzọ na-eguzogide abrasion bụ nhọrọ zuru oke mgbe nchebe site na ịcha ọkọ bụ nchegbu kachasị mkpa. Dị na mkpuchi na otu ma ọ bụ abụọ n'akụkụ, ọ bụ kwesịrị ekwesị maka ngwa na-achọ abrasion, Unyi na mgbaze eguzogide.
Ihe mgbochi nkpuchi
DHUA na-enye mkpuchi mkpuchi siri ike nke bụ mkpuchi mkpuchi doro anya na-enye ihe na-adịgide adịgide, nguzogide dị elu karịa fogging na ọ bụ ọdịnala ahaziri maka mpempe akwụkwọ polycarbonate, ihe nkiri polycarbonate, ọ bụ mkpuchi mkpuchi mmiri na dakọtara na ọgwụgwọ mkpuchi. Ngwa ya bụ oke ọhịa na mpaghara visor, dị ka mkpuchi anya nchekwa, nkpuchi & ọta ihu, ngwa elektrọnik na wdg.
A na-etinye ihe nkiri dị mkpa nke aluminom na mkpụrụ ahụ, ma kpuchie ya na mkpuchi nchebe doro anya. Ihe nkiri a nwere ike ibu ihe ocha iji meputa ihe ngosi di elu, ma obu uzo uzo nke uzo abuo, nke a makwaara dika enyo ihu abuo. A na ntekwasa mkpụrụ bụ acrylic, na ndị ọzọ na plastic mkpụrụ dị ka PETG, Polycarbonate na Polystyrene mpempe akwụkwọ nwere ike ntekwasa ike ndị a otu mmetụta.
Ihe mkpuchi mkpuchi acryli